अस्ट्रिया गरेको राम्रो डेटिङ अनुप्रयोग परीक्षण गर्न राख्नु
मा मोबाइल डेटिङ तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन प्रयोग लागि बेमतलबको जिस्क्याइले छ । त्यहाँ दुई प्रकार को प्रस्ताव: छुट्टै डेटिङ अनुप्रयोग, र एकल — र इश्कबाज-अनुप्रयोग को अनलाइन डेटिङ साइटहरु, जसको अनुप्रयोग सामान्यतया एक मुक्त अतिरिक्त सेवा मा शीर्ष । हामी मतभेद छ तर, त्यसपछि के गर्ने तपाईं भेट्न अनलाइन: यो बरु एक गम्भीर जीवन साथी, वा द्रुत इश्कबाज बीच मा? हामी सिफारिस कि तपाईं मात्र निर्माण अनलाइन, प्रोफाइल, र त्यसपछि स्मार्टफोनको अनुप्रयोग स्थापना. यो बचत को धेरै. — क्षेत्र रूपमा एक अग्रणी साथी गम्भीर जीवन साथी । यहाँ आर देख लागि शैक्षिक गाए हरुवा वर्ष । थियो जुन मा, पहिलो प्रमुख एकल पोर्टल मा अष्ट्रिया, जो प्रदान गर्न सक्षम थियो सदस्यहरू एक. गिरावट मा, यो एन्ड्रोइड अनुप्रयोग अन्तमा आए । मा कुलीन साथी । सक्रिय छन् — मुख्यतः शैक्षिक र मुख्यतः को खोज मा एक जीवन साथी । कुलीन साथी अनुप्रयोग को एक छ. सबैभन्दा परिपक्व सेवाहरू परीक्षण, तर हामी पनि सिफारिस यहाँ: रजस्ट्री र व्यक्ति रुचि पीसी मा, इश्कबाज र त्यसपछि मार्फत यो अनुप्रयोग छ. ‘नव आगन्तुक’ प्यारी (नोभेम्बर देखि मा) छ मा विकसित रिकर्डर टेम्पो मा शीर्ष बीचमा साथी एजेंसियों मा इन्टरनेट । स्पष्ट छ कि अब भन्दा बढी छ । अष्ट्रीया प्यारी सदस्य चाहना लागि एक गम्भीर जीवन साथी छ पनि एक मोबाइल अनुप्रयोग — देख्यो गम्भीर छ । यो को लागि उपलब्ध छ र एन्ड्रोइड. तपाईं गर्नुपर्छ पहिलो दर्ता मार्फत एक पीसी वा नोटबुक र लगभग केन्द्रीय व्यक्ति मार्फत जान, फोटो अपलोड, आदि. पछि तपाईं प्राप्त पहिलो, र तपाईं जवाफ दिन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि को पाठ्यक्रम मार्फत यो अनुप्रयोग छ. यी सुन्दर अनुप्रयोग, कान्छो, अधिक मा — यो-जाने र निरन्तर बेमतलबको जिस्क्याइले रडार पछि मिलान हिट स्क्यान गर्न. सामाजिक डेटिङ नेटवर्क चिडियाघर छ अब एक गोप्य: लाखौं को हालको एकल संसारमा लग छन् र यो पृष्ठ बनाउन एक कसेर कोशिश सामाजिक डेटिङ समुदाय । उत्पत्तिभन्दा पहिलेदेखिनै देखि, यो गर्मी मा मिश्रण । सदस्य अस्ट्रिया मा. र के गर्न छ कि को पाठ्यक्रम मार्फत यो अनुप्रयोग छ. जो को लागि उपलब्ध छ र एन्ड्रोइड. चिडियाखाना गरेको नवीकरण गरिएको छ सबै गोल, र जर्मन भाषा बोल्ने. विपरीत मा भिडियो मिति चिडियाखाना मा एक सानो अधिक बारेमा ‘डेटिङ’ मात्र भन्दा ‘मित्र’, र एकल यहाँ छन् यो खण्ड मा पनि छान्नुभएको रूपमा, त्यहाँ छ । -मिति संग छ लाख भन्दा रजिष्ट्रेशन स्पष्ट वैश्विक बजार मा नेता डेटिङ र वयस्क लागि डेटिङ संग दूरी साथै संख्या अस्ट्रिया मा.
पनि, यहाँ को टिप: एक राम्रो बनाउन पहिलो इन्टरनेट मार्फत एक प्रोफाइल. किनभने कि छ बस सुखद र लिन छैन त लामो छ । परिश्रम संसारको कसेर कोशिश मोबाइल डेटिङ सेवा को लागि समलिङ्गी पुरुष संग, लाख भन्दा प्रयोगकर्ता मा. पिस्नु गर्न सक्छन् हुन पुगेको वेबसाइट मार्फत, तर विशुद्ध रूपमा एक स्मार्टफोनको अनुप्रयोग. स्थान-सेवा आधार लागि स्वभाविक (सेक्स) डेटिङ मात्र अंग्रेजी मा छ, तर सबै नै, पहिले नै राम्रो छ ।. डेटिङ अनुप्रयोग मा बिना छ । त्यसैले, प्रयोगकर्ता हरेक दिन प्राप्त, एक म्याच छ । तपाईं रुचि हो भने यो प्रोफाइलको लागि, तपाईं लेख्न हुनेछ घण्टा को समय प्रत्येक अन्य । पहिलो, दुवै भने कम्तीमा एक सन्देश कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, असीमित छ. बिना छ आइओएस र एन्ड्रोइड लागि उपलब्ध छ । साथै, प्रयोगकर्ता पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो घडी मापन गर्न आफ्नो हृदय दर, जब तपाईं हेर्न एक नयाँ मेल खाँदैन । यस आधारमा डाटा, परिष्कृत आफ्नो प्रस्ताव छ । त्यसैले सम्म, प्रयोगकर्ताहरूको लाखौं दर्ता गरिएको छ.
प्रयोगकर्ता, तर, एकदम कम । मुक्त स्पिन डेटिङ अनुप्रयोग छ एक बहुमुखी अनुप्रयोग तपाईं को लागि मस्ती गर्न संग, शेयर, र नयाँ मान्छे । वरिपरि । डाउनलोड दर्ता गरेका थिए अस्ट्रिया मा. धेरै च्याट कोठा, एक व्यापक मंच र धेरै अनुकूल प्रयोगकर्ता मा यो समुदाय । मान्छे धेरै अनुकूल छन् र खुला. घडी । डेटिङ अनुप्रयोगहरू छन्, मा आज, र भएकोले सबैका मालिक एक स्मार्टफोन गर्न, एक निश्चित छ । मानक माप बनाउन प्रयोग को संभावना मोबाइल इश्कबाज. अलग बीच ‘इन्टरनेट’ र ‘मोबाइल’ छ, तर, झन् सरल छ: अन्ततः, यो पूर्णतया कुनै कुरा, तपाईं कि एक पीसी मा द्वारा, आईप्याड, वा द्वारा स्मार्टफोनको पहुँच गर्न आफ्नो मनपर्ने एकल । एकल एकल छ. अगाडि एक स्क्रीन, यो अब बस््छ, सीधा कुरा छैन. यो प्रदायकहरू हेर्न यो बाटो: सबै ‘ठूला’ प्रदान गर्न आफ्नो सदस्यहरू आज, सबै बाटो पोर्टल — कुनै कुरा तपाईं कि बसिरहेका छन् मा आफ्नो डेस्क मा, सोफा वा बस मा. कार मा यो पक्ष कृपया. डेटिङ अनुप्रयोग रहेको, मा नियन्त्रण. दानियल पालन देखि दुनिया को एकल स्टक बजारहरु मा अष्ट्रिया र छ रूपमा मिडिया मा एक अग्रणी विशेषज्ञ मा विषय छ । परीक्षण- ‘सुन्दर डेटिङ अनुप्रयोगहरू लागि मा-यो-जाने’ यो अद्यावधिक सबै को महिना. शेयर ।
← यो एक सम्बन्ध - हो वा होइन? प्यारी
चलचित्रमा मुक्त अनलाइन चलचित्र मुक्त प्रवाह →